QM oo digniintii ugu darnayd ka soo saartay Abaaraha
Madaxa hawlaha bani’aadminimada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dunidu ay wajahayso dhibaatadii bani’aadminimo ee ugu weynayd tan iyo markii la aasaasay Qaramada Midoobay 1945kii.
Stephen O’Brien ayaa u sheegay golaha amaanka in tiro ka badan 20 Milyan oo qof oo ku nool afar dal oo kala ah Suudaanta koofureed, Yemen, Soomaaliya iyo Nayjeeriya ay wajahayaan gaajo iyo macaluul, haddii aan la helin dadaal loo dhan yahay oo caalami ah.
Mr O’brien wuxuu sheegay in baahida ugu daran ay ka jirto Yemen, halkaasoo 3 meelood oo meel dadka dalkaas ku nool ay khatar ku jiraan, ayadoo xaaladdana ay sii xumaanayso.
Waa digniintii ugu dambaysay ee ka soo baxda Qaramada Midoobay oo ah in aysan haysan imkaaniyaadkii ay wax uga qaban lahaayeen mushaakilkan sii darsanaya ee dalal badan ka jira.
Qorshaha AMISOM oo ay Suurtagal tahay in uusan Guuleysan
Madeira ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay xaaladda iminka ay ku sugan yihiin aysan awood u lahayn inay ka taliyaan goobaha Al-Shabaab laga Saaray.
Waxaa la joogaa, ayuu yiri, waqtigii aan caddeyn lahayn in Amisom aysan weligood joogi doonin Soomaaliya, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay ciidamo si buuxda u shaqeeya oo maamula goobaha Amisom ay ka Saarto Al-Shabaab.